Maxaa la sameeyaa haddii qof dhinto sida | USAHello | USAHello
Raadi tallaabooyinka aad u baahan tahay in la qaato marka qof uu ku geeriyooday Maraykanka. Ogow waxa aad samaynayso haddii aad rabto in aad ka tagto, sababtoo ah xubin ka tirsan qoyska dhinto, ama uu dhinto wadan kale.
In Maraykanka, dadka intooda badan ku dhinta isbitaalka ama guriga xanaanada waayeelka. Kalkaalisada caafimaadka iyo takhtarka ogaan doontaa waxa la sameeyo marka qof dhinto. Waxay ku weydiin doonaan su'aalo si aad hanuuniyo oo kaa caawinaya in aad go'aan sameeyaan. Americans odhan kara “dhintay” Or “maray” halkii “dhintay”. Waxaad isticmaali kartaa erayada “dhintay” Or “Crochet” Or “hadhaagii” Markii ay ka hadlaan jidhka.
Marka uu qof dhinto guriga
Maxaa dhacaya haddii qof ku dhinto guriga sababta oo ah cudurka, waxaa laga yaabaa in dhakhtarkaaga ama shaqaalaha caafimaadka si ay kuu caawiyaan. Uma baahnid in aad samayn wax ilaa aad diyaar u tahay. Waxaad qaadan kartaa waqti aad u baahan tahay, waayo, xaflad kasta oo diin ama diyaarinta. Shaqaalaha caafimaadka ayaa soo saari kartaa cadeyn rasmi ah dhimasho iyo foomamka buuxiyo.
Marka qof si lama filaan ah uu dhinto
Haddii uu qof si lama filaan ah u dhinto, waxaad u baahan doontaa inaad wacdo 911 Si aad u soo sheegto dhimasho ah. waxaa iman doona sarkaal boolis ah ama shaqaale xaalad degdeg ah. Waxay sheegi doonaa imtixaan caafimaadka. baaraha caafimaad waa qof eegayaa jidhka iyo ogyahay ama caddeeyo sida qofka dhintay.
Sida loo dhimasho ka qaban lama filayo
Hel shahaado dhimasho
baaraha caafimaad bilaabi doonaan shahaadada dhimashada diiwaan gelinta dhimashada. shahaadada dhimashada ayaa ka dhici doona todobaad ama ka badan mustaqbalka. Waxaa lagu weydiin doonaa saraakiil badan oo si aad u hesho nuqul ka mid ah shahaadada dhimashada. Waxaa laga yaabaa inaad u baahan tahay inaad 10 Nuqulo ka mid ah shahaadada dhimashada.
Sida loo codsado shahaadada dhimashada dheeraad ah
Xabaalidda iyo gubashadii
Waa in aad si dhintay meydkiis oo guri aaska tago in loo diyaar garoobo aaska. Doorka aaska waa mid aad u qaali ah. Haddii gubista qorsheeyay (Gubay oo dambas idiin siiyey inaad) , Uma baahnid in aad bixisid guriga aaska. Marka uu qof dhinto, jidhka si toos ah uga isbitaalka ama gurigaaga ka meydadkii Holocaust u tegi kartaa.
Uma baahnid in aad si ay u iibsadaan naxashka qaali ah (aasay Box). Waxaa jira sanduuqyo alwaax iyo baakado ku haboon gubista fudud iyo aaska. Waxaad samayn kartaa xafladaha aaska adiga kuu gaar ah ama doorato adeegga diini ah.
Waxyaabaha aad u baahan doontaa marka qof dhinto:
U sheeg loo-shaqeeyaha
Si aad u hesho nuqulo ka mid ah shahaadada dhimashada
La xiriir waaxda kasta oo dawladda la siiyay faa'iidooyinka, sida ammaanka bulshada
U sheeg shirkadaha caymiska: caymiska caafimaadka iyo caymiska nafta iyo caymiska baabuurta shirkadaha iyo guryaha
La xiriir bangiga kasta oo uu leeyahay xisaab ay
Samee liis ah biilasha in aad u baahan tahay inaad bixiso iyo adeegyada baajiso kasta (Sida telefoonka) Waxaa la ma isticmaalo
Tirtiridda ee kaararka deynta si bixinta adeegyada iyo lacagaha kale ee bil kasta ha sii
Waxaan wax badan ka ogaatid
Maxaa la sameeyaa dhimashada qof ka dib markii
Ka dib dhacdo dhimashada: Liiska (Waxa ay la xidhiidhaa gobolka Washington, laakiin waxaa waxtar leh in gobol kasta si ay u caawiyaan aad la abuuro liiska u gaar ah)
Maxaa dhacaya haddii qofka dhintay dal kale?
Waxaa laga yaabaa in aad leedahay xubnaha qoyska ee dalalka kale. Marka uu qof geeriyoodo ama dhinta dal kale, waxaa laga yaabaa in aad rabto in ay u safraan meel ka baxsan Maraykanka. Tani waa muhiim: Waxaan fahansanahay khataraha iyo xeerarka la xiriira inuu u safro ee degdeg ah ka hor ka tagay.
Read waxa uu sheegaayo US Customs iyo Adeega Socdaalka (USCIS) Waayo, safarka degdegga ah
Haddii aad ka shakisan tahay, la hadal qof ka tirsan USCIS inta aadan tegin.
laga yaabaa in aanay ogolaan in aad idinku soo noqon oo aan dukumentiyada habboon. USCIS soo saaray afar nooc oo waraaqaha safarka:
Dib-u-soo galo fasax
macluumaadka USCIS ku saabsan warqadaha safarka
Dukumentiyada safarka ee qaxootiga